‘प्रकाश दाहाल अर्थात एक कुशल व्यवस्थापक’ - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
अशोज २६ गते, २०७४ - १८:१८
आधुनिक समाज र व्यस्त जनजीवनमा एक मिनेटको महत्व निकै गुरुत्वको हुन्छ । व्यस्त सामाजिक जीवनमा समयको व्यवस्थापन सैद्धान्तिक दृष्टिले सामान्य सवाल लागे पनि व्यवहारिक जीवनका दृष्टिले निकै गुरुत्वपूर्ण छ । आज व्यक्तिगत जीवन, संगठन र संस्थागत प्रणालीमा समेत समयको व्यवस्थापनले निकै महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ । कतिपय सन्दर्भमा समयको व्यवस्थापन नै व्यक्तिको सफलता र असफलताको ब्यारोमिटर समेत बन्ने गरेको छ । समयको व्यवस्थापन कसरी गर्ने रु व्यक्तिगत र प्रशासनिक जीवनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?
आधुनिक समाज र प्रणालीका दृष्टिले यसले महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ । हकिन्सका अनुसार ‘समयको व्यवस्थापनको अर्थ आधुनिक जीवनका बहुआयमिक आयामहरुको व्यवस्थापन र सन्तुलन हो ।’ नीति निर्माता र त्यसका व्यवस्थापकहरुले समय कसरी व्यवस्थापन गर्दछन्, त्यसले देशकै राजनीति र विकासको चित्रमा काफी प्रभाव राख्दछ । अझ राजनेताका रुपमा स्थापित नेतृत्वको कार्यालय र त्यसको टिम कस्तो छ र ? भन्ने कुरासँग देशकै भविष्य जोडिएको हुन्छ ।
यसर्थ, पनि समयको व्यवस्थापन गर्नसक्ने नेतृत्व र व्यवस्थापकको खोजी आजको सन्दर्भमा निकै महत्वपूर्ण छ । सर्वहारा वर्गीय राजनीतिक धरातल र वर्ग सङ्घर्षको पेचिलो मोर्चाबाट निखारिएका युवा नेता हुन् प्रकाश दाहाल । तर, खुल्ला राजनीतिमा प्रवेशसँगै मध्यम वर्ग र मीडिया उनका विरुद्ध यति धेरै लागे, मानौं कि उनी नेपालमा सबैभन्दा बढ्ता कुख्याती कमाएका व्यक्ति हुन् ।
यथार्थ त्यस्तो हो वा होइन रु प्रचार प्राकृतिक छ वा कृतिम एवं पूर्वाग्रह प्रेरित रु यसको कसैले सामान्य समीक्षा गर्नेसम्म कोशिस गरेनन् । उनीहरुका लागि त्यो समीक्षा जरुरी पनि थिएन । किनकि, प्रचारको एक मात्र ध्येय माओवादी आन्दोलन र यसको नेतृत्वमाथि विभिन्न कोणबाट प्रहार गर्नु नै थियो ।
व्यक्ति सामाजिक जीवन र परिवेशको उपज हो । सामाजिक जीवन र परिवेशको अपवाद हुने गरी व्यक्तित्वको निर्माण र विकास दुवै असम्भव हुन्छ । सामाजिक संरचना, आर्थिक आधार र उपरिसंचरनाको प्रभाव व्यक्तित्व निर्माणमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रा आर्थिक र राजनीतिक आधारहरुले व्यक्तित्व निर्माणमा पनि निर्णायक अर्थ राख्दछन् ।
यसरी हेर्दा समाजमा भएका गुण दोषको असर व्यक्तिको जीवनमा पनि लागु हुन्छ । त्यही गुण र दोषको अन्तर्सम्बन्धकै जगमा उभिएका छन् प्रकाश दाहाल ।
प्रकाश दाहाल राष्ट्रिय राजनीतिका निर्णायक पात्र पक्कै होइनन् । तर, उनको भूमिका र सम्बन्धले माओवादी आन्दोलन, नेतृत्व र भविष्यमा निकै ठूलो अर्थ राख्दछ । कुनै बेला उनी प्रकाश दाहाल मात्रै थिए । संयोग र साधनाको जगमा आज उनी फरक भूमिकामा छन् ।
आम मानिसमा जस्तै उनमा पनि गुण र दोषहरु अवश्य छन् । तर, गुण र दोषको तुलनामा उनको कुख्याती वा प्रख्यातीमा के मूख्य हो रु यसमाथि अलिकति बिमर्श आवश्यक ठान्दछु । प्रकाश दाहाल राष्ट्रिय राजनीतिका निर्णायक पात्र पक्कै होइनन् । तर, उनको भूमिका र सम्बन्धले माओवादी आन्दोलन, नेतृत्व र भविष्यमा निकै ठूलो अर्थ राख्दछ । कुनै बेला उनी प्रकाश दाहाल मात्रै थिए । संयोग र साधनाको जगमा आज उनी फरक भूमिकामा छन् ।
उनी प्राथमिक कार्यसूचीमा राख्नैपर्ने कार्यक्रमको व्यवस्थापनमा आफ्नो अडान राख्छन् । कसले के भन्छ र ? त्यसको उनी मतलव गर्दैनन् । बरु, कसरी प्रचण्ड सफल हुन्छन्, कुन योजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदा जनताको सेवा, आर्थिक समृद्धि र वर्गको आकांक्षा पुरा हुन सक्दछ ? त्यसमा उनको पुरै ध्यान जान्छ । अनि, आफ्नो निर्णयमा उनी कठोरतापूर्वक अघि बढ्छन् र सफल हुन्छन् । यसो गर्दा कहिलेकाहीँ आफ्नो स्वार्थ पूर्ति नहुँदा नेताहरु उनीसँग बिच्कन्छन् र उनका विरुद्ध भ्रामक प्रचारमा लाग्छन् ।
प्रकाशको अर्को विशेषता प्रशासकीय कुशलता हो । उनी प्रशासक, कुटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ लगायतका सबैसँग दमका साथ आफ्नो मत राख्ने हैसियत राख्छन् । उनी निर्भिकतापूर्वक आफ्नो कुरा राख्छन् र त्यसलाई कार्यान्वयन गराएरै छोड्छन् । उनको यहीँ विशेषताका कारण प्रशासक, राजनीतिक नेतादेखि कुटनीतिज्ञसम्म सबै उनको कुशलतासामू नतमस्तक हुन्छन् ।
उनी सबैसँग आफ्नो कुरा सहज, कलात्मक र मित्रवत् ढंगले राख्न सक्छन्, त्यसकै कारण उनी नागरिकका चाहना र विकासका काममा सफल हुन्छन् । प्रकाश दाहालको काल्पनिक चित्र जति कुरुप रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ ।
प्रकाश जिब्रो चपाउन जान्दैनन्, उनलाई आफ्नोभन्दा प्रचण्डको कार्यकाल असफल होला भन्ने चिन्ताले सताएकै हुन्छ । उनी आफ्नो भन्दा प्रचण्ड, पार्टी र राष्ट्रिय हित एवं स्वार्थका बारेमा बढी सोच्छन् । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत स्वार्थका लागि भेट्न खोज्ने, दवाव दिने, जालसाजी गर्ने सोंच र प्रवृत्तिलाई सिधै इन्कार गर्छन्, यही पूँजीले नै प्रकाश माओवादी आन्दोलनको हेडक्वार्टर र सत्ता केन्द्रको व्यवस्थापनको निरन्तरतामा छन् ।
तर, उनको प्रवृत्ति र सोंच त्यसभन्दा बिल्कूल पृथक छ । उनी हरेक कुरालाई सहजतामा ग्रहण गर्दछन्, साना ठूला समस्यामा पनि आफ्नो हैसियतले सहयोग गर्छन्, सद्भाव राख्छन् । उनी कसैको पनि समस्यामा तमासे बन्दैनन्, भावनात्मक रुपमा उनी जति नरम छन्, त्यसले जतिसुकै विरोधका बाबजूद पनि उनको उचाईं बढाइरहेको छ ।
सायद विरोधीहरु प्रकाशको यही उचाईबाट आतङ्कित पनि छन् । सत्य कुराका लागि प्रकाश जिब्रो चपाउन जान्दैनन्, उनलाई आफ्नोभन्दा प्रचण्डको कार्यकाल असफल होला भन्ने चिन्ताले सताएकै हुन्छ । उनी आफ्नो भन्दा प्रचण्ड, पार्टी र राष्ट्रिय हित एवं स्वार्थका बारेमा बढी सोच्छन् । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत स्वार्थका लागि भेट्न खोज्ने, दवाव दिने, जालसाजी गर्ने सोंच र प्रवृत्तिलाई सिधै इन्कार गर्छन्, यही पूँजीले नै प्रकाश माओवादी आन्दोलनको हेडक्वार्टर र सत्ता केन्द्रको व्यवस्थापनको निरन्तरतामा छन् ।
राजनीतिमा समर्थन र विरोध स्वाभाविक होला । तर, कतिपय यस्ता मुद्दाहरु उठाइन्छ, जहाँ सत्यताको एक अ‌ंश पनि हुँदैन । मीडियाहरुले यस्ता विषयहरु उठाइदिन्छन्, जहाँ भ्रमको जञ्जाल मात्रै हुन्छ । तर, जनतालाई भ्रम दिन सकिने प्रशस्त कृतिम आधार खडा गरिएका हुन्छन् । प्रकाशमा जुन दृढता र ईच्छाशक्ति छ, त्यसमाथि प्रहार गरेर प्रचण्ड कमजोर पार्ने प्रयत्न आजको पक्कै होइन । तर, कतिपय माओवादी नेताहरु नै यो सत्य बुझ्दैनन् ।
अनि, प्रकाशमाथिको प्रहारलाई प्रचण्ड र माओवादी आन्दोलनको सम्बन्धबाट अलग गरेर हेर्ने गल्ती गर्दछन् । यहीँ कारण बेलाबखत विरोधीहरुले पनि चरमा छिनो हाल्ने अवसर पाउने गरेका छन् । समग्रमा प्रकाश दाहाल एक आम र सामान्य नागरिक हुन् ।
तर, उनीमा केही विशेष गुणहरु छन्, जसका कारण नै प्रकाशका रुपमा स्थापित छन् । उनको व्यक्तित्वलाई जति कुरुप तस्वीरका रुपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिन्छ, त्यहाँभित्र उनको व्यक्तित्वसँगको आतंक सन्निहित छ । कुशल व्यवस्थापन, प्रशासकीय दक्षता, मित्रवत् सम्बन्ध र कामको प्राथमिकता एवं गुरुत्वको गहिराई बुझ्न सक्ने क्षमताका कारण नै उनी आजको ठाउँमा छन् । यही गुणलाई विकास गर्दै जाँदा एक दिन उनको व्यक्तित्वले राजनीतिमा छुट्टै पहिचान लिनेमा कुनै शंका छैन।
एभरेष्ट दैनिकबाट साभार
अशोज २६ गते, २०७४ - १८:१८ मा प्रकाशित